Formaldehyde (ဖော်မယ်ဒီဟိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Formaldehyde (ဖော်မယ်ဒီဟိုက်)
Formaldehyde (ဖော်မယ်ဒီဟိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Formaldehyde (ဖော်မယ်ဒီဟိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
formaldehyde ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
ချွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အနံ့အသက်မကောင်းခြင်းများအား ကုသရန် Formaldehyde ကို အသုံးပြုသည်။Formaldehyde အရည်သည် ခြောက်သွေ့စေသော ဂုဏ်သတ္တိရှိသဖြင့် ၎င်းကို ကြွက်နို့ကုသရာတွင် အနာအားခြောက်သွေ့နေစေရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။Formaldehyde သည် အစိုဓါတ်များပြားလွန်းခြင်းကို ထိန်းညှိခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။
Formaldehyde ကို အရေပြားပေါ်တွင်သာ အသုံးပြုရမည်။ အဖုံးဖွင့်ထားပြီးဖြစ်လျှင် ဗူး/ပုလင်းကို မလှုပ်ပါနှင့်။ ဆေးဗူး/ပုလင်းတွင် ပါဝင်သော လမ်းညွှန်ချက်များကို အတိအကျလိုက်နာပြီး ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့် တစ်နေ့တစ်ခါ) အရေပြားပေါ်သို့ လိမ်းပေးရပါမည်။ မျက်စိ၊နှာခေါင်း သို့မဟုတ် ပါးစပ်များထဲ မဝင်စေရန် သတိပြုပါ။ အဆိုပါ နေရာများ သို့မဟုတ် ဆေးလိမ်းရန် မလိုသည့် အရေပြားနေရာများအား ဆေးနှင့် ထိမိပါက ဆပ်ပြာနှင့် ရေကို အသုံးပြုပြီး ပြောင်စင်အောင် ဆေးကြောပါ။ အကယ်၍ ရေဆေးပြီးသော်လည်း အရေပြားတွင် ထူးခြားမှုတစုံတရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးပြသပါ။ ဆေးအာနိသင် အထက်မြက်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ဆေးကို မှန်မှန်သုံးစွဲပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသည့် အချိန်တွင် အသုံးပြုရန် မမေ့ပါနှင့်။ ရောဂါအခြေအနေ မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Formaldehyde ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ formaldehyde ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ formaldehyde ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Formaldehyde ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Formaldehyde ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Formaldehyde ကို အသုံးမပြုခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
formaldehyde ဆေးရည်တွင် ပါရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းတမျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက အသုံးမပြုပါနဲ့။
အကယ်၍ အဆိုပါ ပစ္စည်းများအား ဓါတ်မတည့်ဘဲ အသုံးပြုလိုက်မိပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံး ပြသပါ။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးအသုံးမပြုမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Formaldehyde က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
အရေပြား နီရဲ ရောင်ရမ်းမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ အရေပြား ပျော့သွားခြင်း သို့မဟုတ် ထူလာ၊မာလာခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများ ဆက်လက်ရှိနေလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံး ပြသပါ။ ဆေးမှရနိုင်သော ကောင်းကျိုးသည် ဆေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးထက် ပိုသည်ဟု ဆရာဝန်များက ယူဆထားသဖြင့် သင့်ကို ဤဆေးသုံးစွဲစေခြင်းဖြစ်သည်ကို သတိချပ်ပါ။ဤဆေးသုံးစွဲသူအများစုတွင် ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ မရှိပါ။ ဆေးနှင့် ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းမှာ အလွန်ရှားပါသည်။ သို့သော် အနီစက်/အင်ပြင်များ ထွက်ခြင်း၊(အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊လည်ချောင်းတို့တွင်) ယားယံခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း၊အလွန်အမင်း ခေါင်းမူးခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း အစရှိသော ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ဆေးဝါးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူရပါမည်။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက formaldehyde နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Formaldehyde ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက formaldehyde နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Formaldehyde က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက formaldehyde နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Formaldehyde ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်၊ကိုယ်ဝန်ယူရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်။
• ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသောဆေး၊ မိမိဖာသာသောက်သုံးသောဆေး၊ဆေးဖက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖုများ နှင့် ဖြည့်စွက်အားဆေးများ သောက်သုံးနေခြင်း ရှိလျှင်
• ဆေး၊အစားအစာ သို့မဟုတ် အရာတခုခုနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင်အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ဆေးမလိမ်းခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေအမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ formaldehyde ကို လိမ့်ရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
လက် သို့မဟုတ် ခြေထောက်တွင် ဖြစ်ပွားသော ကြွက်နို့များအတွက်
အရေပြား လိမ်းဆေး ။ ကြွက်နို့ပေါ်သို့ 3% v/v ဆေးရည် သို့မဟုတ် 0.75% ရေနှင့်ဖျော်နိုင်သော ဂျဲလ်ကို လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ formaldehyde ကို အသုံးပြုရမည့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
formaldehyde ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
formaldehyde ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• လိမ်းဆေး ၁၀%
လိမ်းဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) ဘာလုပ်ရမလဲ။
Formaldehyde ကို အသုံးပြုဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးအသုံးပြုပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ အသုံးပြုလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။